Ukungaqheleki ngenqanaba eliphezulu lobugcisa kunye negraphic ebizwa ngokuba yiFlaming Core | I-Androidsis
I-Flaming Core yenye yesihloko esitsha se-Android Apho siya kuthi siphathe uhlobo lwerobhothi yezobuchwephesha eya kuthi ibenomsebenzi wokungqubana neentshaba ngenxa yoncedo lwethu olungenakuthelekiswa nanto.
Omnye wale midlalo apho umgangatho wegraphic unyuke kakhulu phambi kwezinye izihloko eziqhelekileyo ze-Android. Zilungiselele ixesha elinomlutha apho ukuphinda ulungelelanise kwaye ulungelelanise injongo yakho kwezi ndawo ziya kuvelisa amaxesha amnandi ngokwenene.
1 Kwinqanaba eliphezulu lobugcisa
2 Ngaphezulu kwamanqanaba angama-160 kwiFlaming Core
3 NgeSpanish kwaye phantse simahla
Kwinqanaba eliphezulu lobugcisa
I-Flaming Core yenye yezo midlalo ezivela kwiscreen sasekhaya eziqala ukusixelela loo nto siza kuyikhupha kancinci. Ungaphantse uve ukuba sijamelene nengozi enkulu eya kuthi isenze sibe nexesha elimnandi leeyure ezininzi. Ngokukodwa kuba, ngaphandle kokubonelela ngenqanaba elikhulu lobuchwephesha kunye nemizobo, inenye yezo mdlalo weqokobhe.
Umnqophiso wethu iya kuba kukwenza amaqhosha ku ukumisa ixesha kwaye ke uthathe isigqibo sendlela ukuba iyakuthatha iirobhothi ezijikelezayo ezinako ukutshabalalisa zonke ezo ntshaba zidibene nazo. Kule nto siza kusebenzisa iindonga ukuvelisa i-carambola enomtsalane esinokuphakamisa ngayo umboniso kwaye sonwabele njengabantwana.
Isiseko esivuthayo Iyakwazi ukuvelisa amaxesha akhethekileyo ngezibane ze-neon, ukuvuka okushiywe yirobhothi yethu engqukuva kunye nokuqhuma okwenzeka ngamaxesha athile. Yiyo loo nto siza kuba sisihloko sokufumanisa ukuba injongo yethu kukusindisa umhlaba.
Ngaphezulu kwamanqanaba angama-160 kwiFlaming Core
I-Flaming Core ineeyure kunye neeyure zomdlalo weqonga osilungeleyo ngawo ngaphezu kwama-160 amanqanaba aneentlobo ezahlukeneyo zeentshaba nazo zonke iintlobo zemigibe. Ukusuka kumanqanaba okuqala izinto ziya kuba lula, kodwa kwimizuzu embalwa siza kuqaphela ukuba kubalulekile ukubeka yonke inyama kwi-grill ukuze ikwazi ukuphuma kuloo manqanaba.
Ngokukodwa kuba sifumana ii-accelerators thwala ngesantya sokophuka kuloo robhothi ingqukuva kunye nezo zibatha zazo zonke iintlobo eziza konakalisa umsebenzi wethu. Ubuncinci sinokusetyenziswa okungenasiphelo kwebhulethi ixesha eliya kuthi; loo mzuzu apho yonke into iyema kwaye ngenxa yoko sinokukhetha ngcono ukuba iirobhothi ezingqukuva phantse zivela kumtyholi ziya kuya phi.
Ngelo xesha masikhe siyijonge Siza kuyazi into yokuba kuthatha isingqisho kunye nentlantsi ukugqiba amanqanaba, ke siyakufika ngokupheleleyo kumatshini wokulutha kwesi sihloko sibizwa ngokuba yiFlaming Core.
NgeSpanish kwaye phantse simahla
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwiFlaming Core yile oku ngeSpanish kwaye nokuba ifreeemium, iya kusinika kwizihlandlo ezininzi ithuba lokuqhubeka nokudlala simahla. Ngamanye amagama, ayizukucela ukubonwa kwentengiso ngokutshintshiselana, kodwa iya kusinika ukhetho lokuphinda ibhaso.
Ngokobuchwephesha ngumdlalo osetyenzwe kakuhle kwaye apho inqanaba lokubonakalayo liphuma ngaphandle nemizobo emikhulu. Ezo zibane zineon, uqhushumbo, ukuvuka kwerobhothi yethu okanye ezo mvelaphi zibonakala zithathiwe kwiHollywood movie iTron, zinika amaxesha ezo uninzi lwethu lujonge ukuzonwabisa. Mhlawumbi singathanda ukuba kubekho iintlobo ngeentlobo kokusingqongileyo, kwaye zininzi iindlela zemidlalo, kodwa njengoko kunjalo, ukuba yinto eqhelekileyo, idlula kwinqanaba kakuhle ukuze ibe yenye yezona zibalaseleyo ngoku.
I-Flaming Core ngumdlalo wasimahla we-Android oko kukubeka kwindima yokulawula uhlobo lwerobhothi eyirhubuluzayo eya kuthi igqithe kumanqanaba amaninzi kwaye kuya kufuneka ushenxise zonke ezo ntshaba. Ngaphezulu kwamanqanaba angama-160 ezenzo ezinyulu ezilindele wena ukuba uyeke ixesha kwaye uthathe isigqibo sokuba uza kuzibamba njani kuzo zonke ezo ndonga ukuze wenze ezona carom zibalaseleyo. Unayo simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, ke sele uthatha ixesha. Ngendlela, ukuba ufuna i-carambola, le bhiliyadi, kodwa ukudubula iArcade.
Inqanaba elihle lobugcisa
Ayisekho enye indlela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ziyeke iindonga ukuze ubulale utshaba kumlutha weFlaming Core